08/17/13 ~ Myanmar News Updates
9:29:00 PM Myanmar News Updates No comments
တခါက အလွန် နွမ်းပါးချို့တဲ့ရှာတဲ့ အဖိုးအိုလင်မယား နှစ်ယောက်ရှိကြပါတယ်...
တစ်နေ့မှာတော့ ရှည်လျားတဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဖွားအိုက သူ့ဆံပင်တွေကို သေချာကျနစွာ ဖြီးသင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘီးတစ်ချောင်း ဝယ်ပေးဖို့ အဖိုးအိုကို ပူဆာပါလေတယ်...
အဖိုးအိုဟာ အဖွားအိုရဲ့ စကားကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမယ့် ဘီးဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့အတွက် မဝယ်ပေးနိုင်ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ ငြင်းဆိုခဲ့ရပါတယ်... အဘိုးအိုဟာ မိမိရဲ့ လက်ပတ်နာရီကြိုးပြတ်သွားတာကိုတောင် ဝယ်လဲဖို့အတွက် ပိုက်ဆံ အလုံအလောက် မရှိကြောင်း အဖွားအိုကို သေချာစွာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်... အဖွားအိုကလည်း အဖိုးအိုရဲ့ စကားကြောင့် ဘီးဝယ်ပေးဖို့ ထပ်မံမတောင်းဆိုတော့ပါဘူး...
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ အဖိုးအိုဟာ အလုပ်ကိုအသွား လမ်းမှာရှိတဲ့ နာရီဆိုင်ကိုဝင်ပြီး သူ့ရဲ့ ကြိုးပြတ်နေတဲ့ လက်ပတ်နာရီလေးကို လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပြီး အဖွားအိုအတွက် ဘီးကလေး တစ်ချောင်းကို ဝယ်ယူထားလိုက်ပါတယ်...
ညနေ အိမ်ပြန်ချိန်မှာတော့ အဖွားအိုအတွက် ဘီးကလေးကိုကိုင်ကာ ပျော်ရွှင်စွာ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်... အိမ်ပြန်ရောက်လို့ အဖွားအိုကို မြင်လိုက်ရချိန်မှာတော့ အဖိုးအိုတစ်ယောက် အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတော့တယ်... အကြောင်းရင်းကတော့ အဖွားအိုရဲ့ အလွန်ရှည်လျားတဲ့ ဆံကေသာကိုမတွေ့ရတော့ဘဲ တိုတောင်းတဲ့ ဆံပင်ပုံစံနဲ့ အဖွားအိုကို မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပါပဲ... ဒါ့အပြင် အဖွားအိုရဲ့ လက်ထဲမှာလည်း လက်ပတ်နာရီကြိုးအသစ်ကလေးကိုလည်း ကိုင်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်...
အဲဒီနောက် အဖိုးအိုနဲ့ အဖွားအိုတို့ဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း မျက်ရည်များကျဆင်းလာကြပါတယ်... သူတို့ နှစ်ယောက် အပြန်အလှန် ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တရားကို နက်ရှိုင်းစွာ ခံစားမိကြလို့ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်....
ကိုယ်ပေးဆပ်ရတဲ့ အချစ် ဆိုတာ နာကျင်ခံစားရတာကလွဲရင် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး...
ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ အချစ်ကိုရရင်တော့ တစုံတခုကို သင်ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းပါ...
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲသာ ဖြစ်ရင်တော့ သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံးသူပါပဲ...
ဒါကြောင့် သင့်မှာ အဲလိုချစ်ရတဲ့ ချစ်သူရှိခဲ့ရင် သင့်ချစ်သူကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးကြပါ... အပြန်အလှန် နားလည်ဂရုစိုက်ကြပါ...
အမျိုးသားအများစုကချစ်သူနှင့်ချိန်းတွေ့ချိန် ကုန်ကျစရိတ်များကို အမျိုးသမီးများပါ မျှခံစေလိုကြ
9:14:00 PM Myanmar News Updates No comments
"၅ရရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသမီးများက ချိန်းတွေ့ရာ တွင် ၎င်းတို့က ငွေကြေးအကုန်အကျခံကြောင်းပြော ခဲ့ပြီး၃၉ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီး များက ၎င်းတို့၏အကုန်အကျခံမှုကို အမျိုးသားများက ငြင်းဆန်စေ ချင်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့"
အမျိုး သားအများစုက အမျိုးသမီးများ နှင့် ချိန်းတွေ့ချိန်တွင် ကုန်ကျစရိတ် များကို အမျိုးသမီးများကလည်း မျှခံသင့်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးများထံ မှ ပိုက်ဆံလက်ခံဖို့ကိုမူ အပြစ်ရှိ သလိုခံစားကြကြောင်း အမေရိ ကန်သုတေသန လေ့လာချက်တစ် ခုတွင် ဩဂုတ်လ၁၁ရက်က ဖော်ပြ ခဲ့သည်။
၆၄ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုး သားများက အမျိုးသမီးများနှင့် ချိန်းတွေ့ရာတွင် ပိုက်ဆံကိုခွဲပေး လိုကြပြီး ၄၄ရာခိုင်နှုန်းသောအ မျိုးသားများမှာမူ မည်သူက ပိုက် ဆံရှင်းရှင်း မရှင်းရှင်း ချစ်မှုရေးရာ စိတ်ဝင်စားမှု နက်ရှိုင်းဆဲဟုပြော ကြသည်။ ၇၆ရာခိုင်နှုန်းသောအ မျိုးသားများသည် ၎င်းတို့ချစ်သူ ဖြစ်လာမည့်သူများထံမှ မုန့်ဖိုးပေး ချေမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြစ်မကင်း သကဲ့သို့ ခံစားတတ်ကြသည်။
အဆိုပါလေ့လာချက်များ ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Chap-man တက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာရှင် ဒေးဗစ်ဖရီဒီရစ်က လေ့လာထား ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းသည် လူပေါင်း ၁၇၀၀ဝကျော်တို့ထံမှ ထင်မြင်ချက်များကို လေ့လာခဲ့ သည်။ ရှစ်ဆယ့်လေးရာခိုင်နှုန်း သောအမျိုးသားနှင့် ၅၈ရာခိုင် နှုန်းသောအမျိုးသားတို့ထံမှ လေ့ လာချက်အရ ချိန်းတွေ့ချိန်ကုန် ကျစရိတ်များအတွက် အမျိုးသား ကသာပေးဆောင်ရကြောင်း သိ ရသည်။
၅ရရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုး သမီးများက ချိန်းတွေ့ရာတွင် ၎င်း တို့က ငွေကြေး အကုန်အကျခံ ကြောင်းပြောခဲ့ပြီး ၃၉ရာခိုင်နှုန်း သောအမျိုးသမီးများက ၎င်းတို့ ၏အကုန်ကျခံမှုကို အမျိုးသား များက ငြင်းဆန်စေချင်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးအများစုတွင် ချိန်း တွေ့ချိန်ကုန်ကျစရိတ်များကို မျှ ဝေကုန်ကျစေကြောင်းလည်း တွေ့ ရသည်။
လူသားများ၏စိတ်အား ထက်သန်မှုအပိုင်းကို နားလည် စေရန် လေ့လာမှုများပြုလုပ်နေ ကြောင်း ဖရီဒီရစ်က နယူးယောက် တွင် ဖွင့်လှစ်သောအမေရိကန် လူမှုရေးရာအဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် တွေ့ဆုံပွဲတွင်တင်ပြခဲ့ပြီး အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲကို ဩဂုတ်၁၃အထိပြု လုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
တစ်ခါတုန်းက သဋ္ဌေးကြီး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ သူက မိကျောင်းတွေမွေးရတာကို ၀ါသနာထုံလေတော့ သူ့အိမ်မှာ ရေကန်ကြီးတူးပြီး မိကျောင်းတွေ မွေးထားလေသတဲ့။ သဋ္ဌေးကြီးမှာက သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိလေသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ သူ့အိမ်မှာ ပါတီ အကြီးကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီး သဋ္ဌေးကြီးက ကြေငြာသတဲ့။ အခု ပါတီမှာ ရှိနေတဲ့ ယောင်္ကျားလေးများ ဟော့ဒီက မိကျောင်းအပြည့်ရေကန်ကြီးထဲကို ဖြတ်ကူးနိုင်တဲ့လူကို ငွေတစ်သန်းဖြစ်ဖြစ် ငါ့သမီးဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်ခွင့်ပြုမယ်။ သူ့စကားဆုံးတာနဲ့ “ဗွမ်း” ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်ရပြီး လူရွယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ဒရောသောပါး ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ရေကန်ကို အသည်းအသန်ကို ဖြတ်ကူးနေလေသတဲ့။ သဋ္ဌေးကြီးလည်း အံသြသွားတာပေ့ါ။ ပါတီကလူတွေကလည်း လူငယ်လေးကို လက်ခုပ်တွေ တီးပြီးတော့ အားပေးကြတာပေါ့။ အဲ့ဒီလိုနဲက နောက်ဆုံးမှာ လူငယ်ကလေးဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရတာကလွဲလို့ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပဲ မိကျောင်းအပြည့်နဲ့ ရေကန်ကြီးကို ဖြတ်ကူးလာနိုင်သတဲ့။
အဲ့ဒီမှာတင်လူငယ်က ဒေါသတကြီးနဲ့ “ဒီမှာ နားထောင်၊ ကျုပ်ခင်ဗျား သမီးကိုလည်း မလိုချင်ဘူး၊ ငွေတစ်သန်းလည်း မလိုချင်ဘူး။ သိချင်တာ တစ်ခုဘဲရှိတယ်။ ဘယ်သကောင့်သားက အားယားပြီး ကျုပ်ကို ဒီကန်ထဲကို တွန်းချလိုက်တာလဲ!!!!!!
8:40:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဘန်ကောက် ၊ ၁၇-၈-၂၀၁၃
8:37:00 PM Myanmar News Updates No comments
လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ သင့်လက်ကိုင်အိတ်ရဲ့ လက်ကိုင် သို့မဟုတ် လည်ပင်းမှာပတ်တဲ့ ပဝါအရှည်ကို အသုံးပြုပြီး ကားမောင်းသူရဲ့ လည်ပင်းကို နောက်ကနေ ရစ်ပြီး ခပ်တင်းတင်းဆွဲထားလိုက်ပါ... သင့်မှာ လက်ကိုင်အိတ်ရော ပဝါရှည်လို လည်ပင်းကို ရစ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းရော တစ်ခုမှ မပါရင်တော့ ကားမောင်းသူရဲ့ အင်္ကျီကော်လံနှစ်ဖက်ကနေကိုင်ပြီး ခုံနောက်ကနေ တင်းတင်းဆွဲထားလိုက်ပါ... အင်္ကျီအပေါ်ဆုံး ကြယ်သီးက ခုနက ပစ္စည်းတွေလိုပဲ ကားမောင်းသူကို လည်ပင်းအစ်စေပြီး သင့်ကို အန္တရာယ်က လွတ်ဖို့ အခွင့်အရေးတခုခု ရရှိစေနိုင်ပါတယ်...
8:26:00 PM Myanmar News Updates2comments
(ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သဖြင့် နာမည်နေရပ်အတိအကျ မဖေါ်ပြတော့ပါ
၁၉၉၆ လောက်က ခလရ(xx)က ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် မိတ္တီလာကို ခွင့်ပြန်လာပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးက အသားဖြူဖြူအရပ်မြင့်မြင့် သူ့ချစ်သူဟာလည်း ရုပ်ချောလှပသူဖြစ်ရုံသာမက မြို့မျက်နှာဖုံး ချမ်းသာသူဖြစ်လေတော့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြ လိုက်ဖက်တဲ့ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး အားလုံးကအားကျရတဲ့စုံတွဲပါ
ချစ်သူနှစ်ယောက်ကလည်း မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ပျော်မဆုံး မော်မဆုံးနဲ့ ပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့လေ
ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ရက်ကို ရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။
တပ်မတော်က အရာရှိဖြစ်လေတော့ ဗိုလ်ကြီးက ဆဖာရီကုတ် ခေါ်တဲ့ အခမ်းအနားဝတ်စုံနဲ့ပါ
သတို့သမီးကလည်း မြန်မာထိုင်မသိမ်းဝတ်စုံဖြူလေးနဲ့ သိပ်လှနေတာပေါ့ဗျာ
အားလုံးက ကံကောင်းတယ် လိုက်ဖက်ပါတယ်ပြောနေကြတဲ့ ဒီစုံတွဲဟာ အားလုံးကထင်မှတ်မထားတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကြီးနဲ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ တချိန်က သတို့သမီးရဲ့ချစ်သူဟောင်းဟာ မင်္ဂလာပွဲကို ဓါးတလက်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီး အားလုံးဝိုင်းဆွဲနေတဲ့ကြားထဲက ဆွဲတဲ့သူတွေရော သတို့သမီး သတို့သားရော ကိုပါ ဓါးနဲ့ခုတ်ခဲ့လို့ သတို့သမီးဟာနေရာတွင်ပဲ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးရရှာပါတယ်
သတို့သမီးရဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်စုံဟာ သွေးချင်းချင်းနီရဲသွားပေမယ့် သတို့သမီးရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ သူမချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သတို့သားကိုဝမ်းနည်းတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကြည့်နေရင်းအသက်ပျောက်သွားရရှာပါတယ်
သတို့သားဟာလည်း သွေးချင်းချင်းနီနေတဲ့ သူရဲ့သတို့သမီးအလောင်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ပြီးငိုကြွေးနေလေတော့ သူ့ရဲ့ဝတ်စုံကလည်း သတို့သမီးရဲ့သွေးတွေနဲ့ရဲရဲနီနေပါတော့တယ်
ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းက မပြီးခဲ့ပါဘူး
ဗိုလ်ကြီးဟာ သူ့ချစ်သူကို မမေ့နိုင်လေတော့
သူ့ချစ်သူသွေးတွေပေနေတဲ့ အခမ်းအနားဝတ်စုံကို မလျှော်ပစ်ပဲ ဒီအတိုင်း မိုက်ရူးရဲဆန်စွာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်
အားလုံးကဝိုင်းပြောကြပေမယ့် ဗိုလ်ကြီးကို ဘယ်လိုမှပြောလို့မရခဲ့ပါဘူး
ဒီအတိုင်းထားတာဟာ သူမအနားမှာရှိနေသလိုပဲလို့ တတွတ်တွတ်ပြောနေပါတော့တယ်
ဒါကြောင့် အဲ့သည်အရာရှိဟာ စစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်ဆက်လက်မသင့်တော်တဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ တပ်မတော်ကနေ အနားယူခဲ့ရပါတယ်
သူဟာ တကိုယ်တည်းဘဝနဲ့ပဲ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ မိတ္တီလာမြို့ နာမည်ကျော် ရေကျော်ခုနှစ်ပေါက် ရေတံခါးမှာ ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်
မသေဆုံးခင်အထိ ညစဉ်ညတိုင်း သူရဲ့ သွေးပေနေတဲ့ သတို့သား ဝတ်စုံကို ရှေ့မှာချပြီး တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတာကို ချောင်းတွေ့တယ်လို့ ဆွေမျိုးနီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်
သူမသေခင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူ့အခန်းထဲမှာ ညဘက်ဆို မြန်မာသတို့သမီး ဝတ်စုံဖြူနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ခဏ ခဏ တွေ့ကြောင်းလဲပြောကြပါတယ်
ဒီလိုနဲ့၂၀၁၀ခုနှစ်(သတို့သမီးသေဆုံးပြီး ၁၄ နှစ် သတို့သားသေဆုံးပြီး တစ်နှစ်မှာပါ)
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း သေသူရဲ့တူတော်တဲ့သူက မိတ္တီလာစစ်ဆေးရုံမှာ ဆေးမှူးဗိုလ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ကျပါတယ်
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ အဆောင်မှာ တခန်းထဲနေသူတွေပါ အရမ်းခင်တဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူကအဲ့သည့်အိမ်ကို အမြဲဝင်ထွက်နေသူဖြစ်တာကြောင့် ဒီဇာတ်လမ်းကိုလည်း ကျွန်တော်ရော သူပါ သိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်
အဲ့သည့်နေ့က မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်ကပါ
နောက်နေ့ တပ်မတော်နေ့ညစာစားပွဲအတွက် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဟာ ဆာဖာရီကုတ်မရှိပါဘူး
ရှိတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးက စားပွဲတက်မှာဆိုတော့ ငှားလို့လဲမရဘူးလေ
ဒါနဲ့ဆက်စပ်တွေးလိုက်တော့ မနှစ်ကဆုံးသွားတဲ့ သူ့ဦးလေး ဗိုလ်ကြီးဟောင်းကို အမှတ်ရပါတယ်
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နာရီစင်နားက သူတို့အိမ်ရောက်တော့ အိမ်သားတွေက "ရှိပါတယ် ဦးလေးပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းထားပါတယ်"တဲ့ ထူးဆန်းတာတခုက ဒီလောက်နှစ်တွေကြာပြီ သူတို့လည်းသေသေချာချာ လျှော်ဖွပ်ပါတယ် ပင်မင်းတွေပေါင်းစုံအပ်ပေမယ့် အကျီ ရင်ဘတ်ကသွေးကွက်ဟာ ဘယ်လိုမှချွတ်လို့မရဘူးတဲ့
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းက ဆရာဝန်ဆိုတော့ အယုံအကြည်မရှိဘူးလေ
အိမ်သားတွေက အပေါ်ထပ်က အသေပိတ်ထားတဲ့အခန်းကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကို ခေါ်လာတယ် အဲ့မှာပဲခြောက်ခြားစရာ ဆာဖာရီကုတ်ကို နံရံမှာချိတ်ထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဖုန်အလိမ်းလိမ်းတက်နေပေမယ့် ဘယ်ဘက်ရင်အုံမှာ ငါးလက်မပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ သွေးကွက်ကြီးကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့နေရပါတယ်
ကျွန်တော်က ကြောက်တတ်လို့ပြန်ဖို့ပြောပေမယ့် သူငယ်ချင်းကမရပါဘူး ချက်ခြင်းဆိုသလိုပဲ
အကျီ င်္ကို အစမ်းကောက်ဝတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်
အဲ့မှာ တော်တယ်ဆိုပီး ငှားပါတယ်
အဲ့သည့်အိမ်ကလည်း အပိုင်သာယူသွားပါဆိုပီး သေသေချာချာထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်
ရေလျှော်ပီးရင် တော်တော်နဲ့ မခြောက်လို့
သူငယ်ချင်းဟာ ရောက်ရောက်ချင်းညနေခင်းမှာပဲ လျှော်ပါတော့တယ်
ခဏနေ နေပူပြန်လှန်းရင် ဒီသွေးကွက်ဟာ နီကျင်ကျင်နဲ့ပြန်ပေါ်လာပါတော့တယ်
ဒီလိုနဲ့အခန်းထဲမှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ဒီဝတ်စုံကြီးကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အခန်းထဲက စင်မှာ ချိတ်ထားပါတယ်
သူက မကြောက်တတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်က အလွန်ကြောက်တာမို့ အပေါ့သွားရင်တောင် လှည့်မကြည့်ရဲပါဘူး
ဒီလိုနဲ့ ည ၁၀ နာရီ ရောက်လာပါတယ်
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် စာဖတ်နေရင်း ဒီကောင်က ဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲမသိပါဘူး
ရုတ်တရက် ဝတ်စုံကြီးကို စိုက်ကြည့်ပြီး
"ဘာဖြစ်လို့ ဒီအစွန်းက မကျွတ်ရသလဲကွာ"
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကြောင်သွားတဲ့ မျက်စိတစ်မှိတ်မှာပဲ မီးပြန်လာပါတယ်
ဆာဖာရီ ဝတ်စုံကြီးရဲ့နားမှာ အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ သွေးဆုတ်ဖြူလျော်နေတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်သတို့သမီးတစ်ယောက်ကို ထိတ်လန့်ဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်
သူငယ်ချင်းက အားခနဲ အော်လိုက်သလို
ကျွန်တော့်ရဲ့ဦးခေါင်းဟာလည်း အဆမတန်ကြီးထွားသွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်
"အစွန်းကဘယ်ကျွတ်မလဲ အမှတ်တစ် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်တဲ့ ရွှေဝါဆပ်ပြာနဲ့မှ မလျှော်တာ"
သူ့ရဲ့ လက်ထဲက ရွှေဝါဆပ်ပြာ နှစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ကို ပေးလိုက်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းလဲ ဝမ်းသာအားရနဲ့ ညတွင်းချင်း လျှော်ပစ်တာ အစွန်းအထင်းမှန်သမျှအကုန်ပျောက်ပီး နောက်တနေ့ dinner ကို ဝတ်စုံအသစ်နဲ့ရင်ကော့ခေါင်းမော့ကာ တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
Ooredoo မှ 3G စနစ် မိုဘိုင်းဆင်းကတ်များကို ကျပ် ၁၅၀၀ ဖြင့် ရောင်းချ၍ တစ်မိနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေးတင်ဒါ အောင်မြင်ထားသည့် ကာတာနိုင်ငံ အခြေစိုက် Ooredoo ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ 3G စနစ် မိုဘိုင်းဆင်းကတ်များကို ကျပ် ၁၅၀၀ နှုန်းဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုခ များကိုလည်း တစ်မိနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ်မှ ကျပ် ၄၀ အတွင်း ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ooredoo ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုင်စင်ရရှိပြီး ခြောက်လအကြာ၌ မိုဘိုင်းဆင်းကတ်များကို စတင် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မိုဘိုင်းဆင်းကတ်တွေကို တန်းစီစောင့်ဆိုင်းပြီး ဈေးကြီး ပေးဝယ်စရာ မလိုအောင် လမ်းဘေးဆိုင် တွေမှာပါ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။ နောက် ရပ်ကွက်တွေထဲမှာရှိတဲ့ ဆိုင်တွေအထိ လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်ယူအသုံးပြု နိုင်အောင် ရောင်းချ ပေးသွားမှာပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခကိုလည်း အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျပ် ၃၅ နဲ့ ၄၀ ကြားဆိုတာက ယာယီတွက်ချက် ထားတာပါ။ နောက်ပိုင်း အတည်ပြု ကြေညာတဲ့ အခါမှာ မြန်မာပြည်သူတွေ အားလုံး စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် ဈေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ရောင်းချ ပေးသွားမှာပါ” ဟု သြဂုတ် ၁၆ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ Ooredoo ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ အကြီးတန်း ကိုယ်စားလှယ်အရာရှိ Mr. Ross Cormack ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် မြို့ကြီးများတွင် ပထမဆုံး အနေဖြင့် Station ပေါင်း တစ်သောင်းကျော် ဆောက်လုပ်၍ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း ကျေးလက်ဒေသများ အထိပါ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သော်လည်း အလွန်ဝေးလံ ခေါင်ပါးသည့် ဒေသများကိုမူ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Ooredoo ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း ၀န်ဆောင်မှု ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့်ငါးနှစ် အတွင်း၌ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို အလုပ်အကိုင်များ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ref & Credit to Eleven Media Group
မယားကောင်းဆိုတာ အိပ်ယာထဲမှာ ပြည့်တန်ဆာလို နေရ-ကျင့်ရတယ်
8:18:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
ကိုယ့်ဟာကို လုံစေချင်လို့ပါ (မကျွေးချင်မပြပါနဲ့)
3:16:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဘေးလ်ကိုခေါ်ယူရန် မလိုအပ်ကြောင်း ရီးယဲလ်ကစားသမား အများစု ပြောကြား
ရီးယဲလ်သည် ဘေးလ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် မသေချာသေးသော်လည်း ရီးယဲလ် ကစားသမားများက ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ဘေးလ်ကို ထပ်မံ မလိုအပ်ဟု ယုံကြည်နေကြောင်း Marcaက ဖော်ပြသွားသည်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် ကစားသမား အများစုက ဂါရတ်သ်ဘေးလ်ကို ခေါ်ယူရန် မလိုအပ်ဟု နည်းပြ ကာလို အန်ဆလော့တီကို ဆွေးနွေး ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ စပိန်ထိပ်တန်း ကလပ်အသင်းကြီး သည် တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းမှ ဝေလ လက်ရွေးစင်ကို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး တစ်ရပ်ဖြင့် ကမ်းလှမ်း ခေါ်ယူ သွားမည်ဟု သတင်းကြီးနေသည်။ အသက်(၂၄)နှစ်ရှိ ဘေးလ်သည် ပြီးခဲ့သည့် ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ဆွတ်ခူး ရယူနိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ ရီးယဲလ်သည် ဘေးလ် ကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် မသေချာသေးသော်လည်း ရီးယဲလ် ကစားသမားများက ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ဘေးလ်ကို ထပ်မံ မလိုအပ်ဟု ယုံကြည်နေကြောင်း Marcaက ဖော်ပြသွားသည်။
ဥက္ကဋ္ဌ ဖလော်ရန်တီနို ပီရက်ဇ်နှင့် အားကစား ဒါရိုက်တာ ဇနီဒင်း ဇီဒန်းတို့က ဘေးလ်ကို စိတ်ဝင်စားနေသည့်တိုင် ကီရင်ဘန်ဇီးမား၊ အိန်ဂျယ်လ်ဒီမာရီယာနှင့် မီဆွတ်အိုဇေးလ် အစရှိသည့် စီနီယာ ကစားသမားများက ယင်းအစီအစဉ်ကို ဆန့်ကျင်နေကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ ရီးယဲလ်၏ ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒို ကိုယ်တိုင်သည်လည်း ဘေးလ်တစ်ယောက် ဘာနေဗျူး ရောက်ရှိ လာမည်ကို လိုလားဖွယ် မရှိကြောင်း သတင်းများက ရေးသားလျှက် ရှိသည်။
ဘေးလ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုအား သတင်းထောက်များက မှတ်ချက် တောင်းခံခဲ့ရာ ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် ကစားသမား က ဘေးလ်ကို ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အမြင် တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ထုတ်ပြောနေမှာတော့ မဟုတ်ဘူးဟု ပြောကြားသွားသည်။
"ဥရောပဘောလုံးပွဲစဉ် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် လင့်ခ်များ"
သြဂုတ် ၁၇ ရက် ညပိုင်းမှ ၁၈ ရက် နံနက်အစောပိုင်းအထိ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည့် ဥရောပလိဂ် ဘောလုံးပွဲစဉ်များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် လင့်ခ်အချို့အား စုစည်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။
သြဂုတ် ၁၇ ရက်၊ စနေ
လီဗာပူးလ် vs စတုတ်စီးတီး (ညနေ ၆း၁၅)
အာဆင်နယ် vs အက်စတန်ဗီလာ
နောဝစ်ခ်ျ vs အဲဗာတန်
ဆန်းဒါးလန်း vs ဖူလ်ဟမ်
ဝက်စ်ဘရွန်း vs ဆောက်သမ်တန်
ဝက်စ်ဟမ်း vs ကာဒစ်
ဆွမ်ဆီး vs မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် (ည ၁၁း၀၀)
ဆိုစီဒက် vs ဂီတာဖေး (ည ၁၁း၃၀)
သြဂုတ် ၁၈ ရက်၊ တနင်္ဂနွေ
ဗယ်လာဒိုလစ် vs ဘီလ်ဘာအို (နံနက် ၁း၃၀)
ဗလင်စီယာ vs မာလာဂါ (နံနက် ၃း၃၀)
ဖရန့်ဖတ် vs ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
ဖရိုင်းဘတ် vs မိန့်ဇ်
ဟမ်းဘတ် vs ဟော်ဖန်ဟိမ်း
စတုဂတ် vs လေဗာကူဆင်
ဝါဒါဘရီမင် vs အော့စ်ဘတ်
ဝုလ်ဘတ် vs ရှော်ကေးလ်
မိုချန်ဂလာဘတ် vs ဟန်နိုဗာ (ည ၁၁း၀၀)
Ref : PlanetMyanmar
2:59:00 PM Myanmar News Updates No comments
Thiri Swe - Charming Vocalist
2:57:00 PM Myanmar News Updates No comments
Phyu Phyu Ko - The Fashion Shoot
အမျိုးသားများပါ သတိထားလာရတော့မည့် အမျိုးသမီးရောဂါ ၇ မျိုး
2:52:00 PM Myanmar News Updates No comments
မျိုးဗီဇ၊ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ ဟော်မုန်း အဆင့် အပြောင်းအလဲကြောင့် တခိျု့ရောဂါတွေက အမျိုးသားတွေမှာထက် အမျိုးသမီး တွေမှာ ပိုပြီး ထိခိုက်မှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များရတဲ့ ဒီရောဂါတွေဟာ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့အတွက် သတိပြု စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ ရင်သားတစ်သျှူး တွေ ပိုမို ပါရှိနေတဲ့အတွက် အမျိုးသားတွေထက် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်သူတွေရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပေမယ့် အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ အချက်ကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် အမျိုးသားတွေ အနေနဲ့ ရောဂါ ရှာဖွေရာမှာ ရင်သားကင်ဆာ စစ်ဆေးမှုကို မပြုလုပ်တတ်ပါဘူး။ အသက် ၅၀ ကျော်တာနဲ့ အ၀လွန်တာတွေဟာ အမျိုးသားတွေကို ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေများ စေတဲ့ အချက်တွေပါ။
အရိုးပါးရောဂါဟာ အရိုးသိပ်သည်းဆကို လျော့နည်းစေပြီး အရိုးကျိုးလွယ်စေပါတယ်။ အမျိုးသမီး သုံးဦးမှာ တစ်ဦးနှုန်း အရိုးပါး ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ အတွက် အမျိုးသားတွေ သတိမမူမိတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ငါးဦးမှာ တစ်ဦးနှုန်း အရိုးပါးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၆၅နှစ် ကနေ ၇၀ ကျော်လာချိန်မှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ အရိုးထုထည်ဟာ စတင် ဆုံးရှုံးလာပါတော့ တယ်။ ကျောက်ကပ် ပြဿနာ၊ သိုင်းရွိုက် ပြဿနာ၊ ဗီတာမင်ဒီ ခိျု့တဲ့တာ၊ စတီးရွိုက်ဆေး ကြာရှည်သောက်သုံးတာ၊ ကင်ဆာ ကုထုံးနဲ့ အတက်ကျဆေး သောက်တာတွေကြောင့် အရိုးသိပ်သည်းဆ ဆုံးရှုံးမှု အဖြစ်များပြီး အရိုးပါးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
(၃) သိုင်းရွိုက် ပြဿနာများ
လည်ပင်း အလယ်အောက်ခြေမှာ ရှိတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကနေ ဟော်မုန်းထွက်ရှိကာ ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အလွန်အမင်း ထွက်ရှိတာကြောင့် နုံးချည့်တာ၊ ကိုယ် အလေးချိန် မြင့်တက်တာ၊ မေ့လွယ်တာ၊ အရေပြားနဲ့ ဆံပင်သား ခြောက်သွေ့တာ တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အလုံအလောက် မထွက်ရှိရင် ကြွက်သား အားနည်းတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာနဲ့ စိတ်တိုတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် သိုင်းရွိုက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅-၈ ဆ ပိုများပေမယ့် အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
(၄) အစာစားခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ
အမျိုးသားတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရင်း အစာစားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ များတတ်ပါတယ်။ အစားလျှော့လွန် ရောဂါရနေသူ ၁၀-၁၅ ရာခိုင် နှုန်းဟာ အမျိုးသားတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ အစာ အာဟာရ မလုံလောက်တာကြောင့် နှလုံးပြဿနာ၊ အရိုး သိပ်သည်းဆ ဆုံးရှုံးမှု၊ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုနဲ့ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ အားကစားကို အလွန်အကျွံ ကစားသူတွေ၊ အ၀လွန်တဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ အစားအသောက်ကို အလွန်အမင်း လျှော့သူတွေဟာ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
(၅) ဆီးအိတ် ပိုးဝင်ခြင်း
ဆီးအိတ်ပိုး ၀င်တာက အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များပေမယ့် အမျိုးသားတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေက ဆီးကျိတ်ကြီးတာ၊ ဆီးကျောက်တည်တာနဲ့ ဆီးပြွန် ကျဉ်းတာတို့ ဖြစ်နေရင် ဆီးအိတ်ပိုးဝင်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ ဆီးအိတ်ပိုးဝင်မှုကို ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ကုသမှု ခံယူနိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏ ဆီးသွားတာ၊ ဆီးထဲ သွေးပါတာ၊ ဆီးအရောင်ရင့်တာ၊ ဆီးသွား တိုင်း ပူစပ်ပူလောင်ဝေဒနာရတာနဲ့ အဖျား နည်းနည်း ရှိတာတွေဟာ ဆီးအိတ်ပိုးဝင်တဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၆) စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေ ထက် စိတ်ဓာတ်ကျ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆ ပိုများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ မတူပါဘူး။ အမျိုး သားတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျရင် ဒေါသ ထွက်တာ၊ စိတ်ဂနာမငြိမ် ဖြစ်တာနဲ့ စိတ်ပျက်တာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါ တယ်။ ကုသမှု မခံယူရင် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ လက္ခဏာက ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။
(၇) ကိုယ်ခံအား လွန်ကဲသော ရောဂါတစ်မျိုး(Lupus) ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ကိုယ်ခံအား စနစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဆဲလ်တွေ ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ကိုယ်တွင်းစနစ်ကို ပြန်တိုက်ဖျက်တဲ့ ဝေဒနာ (Autoimmune Disorder) ဖြစ်သူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေ များပေမယ့် အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါ တယ်။ လက္ခဏာ အနေနဲ့ အဆစ်ရောင်ရမ်း တာ၊ အဆစ်နာတာ၊ ကြွက်သား အားနည်း တာ၊ အလွန်အမင်း မောပန်းတာ၊ အကြောင်းရင်း မရှိဘဲ ဖျားတာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ ခြေထောက် ရောင်တာ၊ ခံတွင်းအနာနဲ့ ဂလင်း တွေ ရောင်ရမ်းတာတို့ကို တွေ့ရတတ်ပါ တယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နည်းပါးကြောင်း သိရပါတယ်။ အရင်က ဆရာဝန်နဲ့ ပြသမှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းခဲ့ပြီး အခုအခါ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးဟာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ နဲ့ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ တို့ကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေ ၁ ဒသမ ၅ ဆ ပိုများပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးလို့ ခံစားရရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင် ပြသသင့် ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုမယ့် အမျိုးသားတို့အတွက် မိန်းမတို့၏ကောင်းခြင်းလက္ခဏာ ၆၄ ရပ်
2:51:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကောင်းခြင်းလက္ခဏာ ၆၄ ရပ်တွင် ခြေ နှင့်လက်ဖ၀ါးလက္ခဏာ ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။(စာရေးသူ)
၇။ သိမ်မွေ့ သော
By ဆရာကြီး ဦးထွန်းလှ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ကို ခင်ပွန်းများမပြောသင့်သောစကားများ
2:26:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဖခင်လောင်းတွေအတွက်ရော ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်ပါ လိုက်နာသင့်တယ်
အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေ ရချိန်မှာ သာမန် အချိန်မှာထက်
အများကြီး ပင်ပန်း နေတတ် ပါတယ်။ မွေးလာမယ့် ရင်သွေးလေး အတွက် ရင်ခုန်
စိတ်လှုပ်ရှား နေရပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ် မပါတာကြောင့်
စိတ်ဓာတ် ကျတာမျိုးလည်း ဖြစ်ရတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်
မိခင်တစ်ဦး နဲ့ တွေ့ချိန်မှာ သူ့ စိတ်ကို ပိုမို မသက်မသာ ဖြစ်ရစေမယ့်
စကားမျိုး မပြောမိ စေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ စကားတွေကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
(၁) နင့်ကို ကြည့်ရတာ ပေါက်ကွဲ တော့မယ့် အတိုင်းပဲ။
အဓိပ္ပာယ် - နင့် ပုံစံက ပင်လယ် ကမ်းခြေက ဝေလငါး နဲ့ တူလိုက်တာ။ ကိုယ်ဝန်
ဆောင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်းတွေက မြင့်တက် လာတာကြောင့် ဗိုက်ဖုံး အင်္ကျီတွေနဲ့
မတော်တော့ တာမျိုး ဖြစ်နေတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို မပြောသင့် ပါဘူး။
အဓိပ္ပာယ် - နင့် ကလေးတွေက ငိုတော့မယ်၊ နို့ဆာလို့ ဂျီကျတော့မယ်၊ ဒီတော့
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရပြီ ဆိုရင် အဆိုး မြင်တဲ့ ရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ပြီး ပြောတတ်
ရတော့မှာ စသဖြင့်ပေါ့။ တကယ်တော့ အမြွှာလေး မွေးလာရင် တစ်ကြိမ် နဲ့ ကလေး
(၃) အခု အိပ်ရေး ၀၀ အိပ်ထားဦးပေါ့။
ဖြစ်တော့မယ့် သူတွေ အနေနဲ့ ကလေး မွေးပြီးတာ နဲ့ အိပ်ရေးပျက်မယ့် အရေး
စိတ် ပင်ပန်းစေမယ့် စကားဖြစ်လို့ ရှောင်သင့် ပါတယ်။
မွေးပြီး ပေမယ့် ရုပ်ရှင် သွားကြည့်နိုင်၊ အေးအေးလူလူ စာဖတ်နိုင်၊
ကလေးငယ်တွေလည်း ရှိတဲ့ မိခင်တွေလည်း အများကြီး ပါပဲ။ ဒါကြောင့်
(၅) နင့် ပုံစံနဲ့ မိခင်နို့ချို ကိုပဲ တိုက်ဦးမယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။
ဘယ်လောက် သေးသေး၊ သူ့ရင်သွေးကို ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရ ရတဲ့ အထိ နို့ချို
(၆) နင့် ကြည့်ရတာ စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။
အဓိပ္ပာယ် - ကိုယ်ဝန် ဆောင်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေလေ။ ဒါကြောင့် အလှပျက်ရပြီ။
ဝေဒနာတွေကို ထောက်ပြပြီး မပြောသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထား ပေမယ့် လှနေဆဲ
ပါပဲ လို့ ပြောပေးသင့် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူတို့ ဗိုက်ဆာလို့ တစ်ခုခု စားချင်တယ် ဆိုရင် ဘာမှ မပြောသင့်
မသေသေးတဲ့ သန္ဓေသားတွေကို အရှင်လတ်လတ်ပြုတ်စားခြင်း
2:25:00 PM Myanmar News Updates No comments
Day Club များတွင် Sexy Dance များကလျက်ရှိကာ အသက်မပြည့်သောကျောင်းသားလေးများပျက်စီးစေနိုင်၍ အရေးယူပေးပါရန်
2:21:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကျွန်တော်၏သမီးဖြစ်သူနှင့်သူ၏ သူငယ်ချင်းများသည် Day Club များသို့ခိုးသွားခဲ့ရာ ကျွန်တော်လိုက်လံ ရှာဖွေရာမှDay Club တော်တော် များများတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
Day Club များသည် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက် မရဘဲပြုလုပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာ့ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရ ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီးတွင်ရှိသော Club တော်တော်များများတွင် Day Party များပြုလုပ် လျက်ရှိပြီး(ရှစ်တန်း၊ ကိုးတန်း) အသက် မပြည့်သေးသော ကလေးများမှာ ကျောင်းပြေးပြီးလာရောက်ေ နကြပါသည်။
၎င်းတို့မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်၊ ဖွင့်ရက်မရှောင်ဘဲ ပြုလုပ်နေပါသည်။ အများဆုံးပြုလုပ်သည့်Club များ ကတော့အလုံမြို့နယ်ရှိ Sky World၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိဆရာဝန်အသင်းနှင် မျက်စောင်း ထိုးစိတ်တိုင်းကျလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့် ကပ်လျက် IQ (or) Cloud 9၊တာမွေမြို့နယ်ရှိတာမွေပလာဇာေ ဘးClub ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းDay Party များတွင် Sexy Dancerကိုပါဆုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်း Club သည် ပြည့်တန်ဆာများနှင့်ပြုလုပ်နေသည်ဟုလည်း ကြားသိရပါသည်။
ကျွန်တော်သည်မိဘတစ်ယောက်အနေနှင့် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ခဲ့ ရပါသည်။ အလားတူ ကလေးများ၏ မိဘများလည်းထပ်တူ ခံစားရမည် ဖြစ်သောကြောင့်အယ်ဒီတာမှတစ်ဆင့်ကလေး မိဘများအားမသွား သင့်သော ထိုနေရာများသို့ မသွားခိုင်းကြရန်ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပေးစေ လိုပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေး မှုနှင့်လျော်ညီသော နေရာများသို့သာ သွားစေ လိုကြောင်းမေတ္တာရပ်ခံ အကြံပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။
2:20:00 PM Myanmar News Updates No comments
အမျိုးသားတွေမှာ ရင်သားကြီးတဲ့ ပြဿနာကို Gynaecomastiaလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရင်သားကြီးတဲ့ ပြဿနာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ အမျိုးသားသုံးပုံတစ်ပုံခန့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်လေးတွေရဲ့၆၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာ ရင်သားအနည်းငယ်ကြီးလာတတ်ပါတယ်။အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ရောက်သွားချိန်မှာ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတတ်တာကြောင့် စိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူး။ ရင်သားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတွေဟာရင်သားတစ်သျှူးတွေ သိပ်သည်းမြဲမြံနေတတ်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်မှာအဆီတွေများနေတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ ရင်သားတစ်သျှူးတွေကတော့ ပျော့တွဲနေပြီး ရင်သားကြီးတာနဲ့တူပေမယ့် ဒါဟာ ရင်သားမှာ အဆီများတာကြောင့် ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Android ထဲက ပါလာတဲ့ ဖျက်မရတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ တရုတ်ဆော့ဝဲတွေကို ဖျက်မယ်
2:12:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဒီတစ်ခါတင်ပေးချင်တာက Huawei သမားတွေအတွက်
လို့တောင် ပြောရမလားမသိဘူး System application တွေကို
ဖျက်ချင်သူတွေအတွက်ပါ အထူးသဖြင့် တရုတ်ဆော့ဝဲတွေပေါ့
အသုံးလည်းမ၀င် နေရာတကာဝင်ရှုပ် နောက်ကွယ်ကနေ
အလုပ်လုပ် ဖုန်းကိုပူနေတာပဲ Huawei တွေက အဆိုးဆုံးပဲ
ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်သူတွေက အဲဒီ Huawei တွေကိုပဲ အားကိုးနေရတာလေ
ဒီတော့ အဲဒီပါလာတဲ့ တရုတ်ဆော့ဝဲတွေထဲက အချို့က ဖျက်မရဘူး
ဒီတော့ ဖျက်ရအောင် ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံးရမယ်
ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာ Root တော့လိုအပ်တယ်နော်
Root ရထားပြီးရင် မိမိစက်ရုပ်ကို ကြိုက်သလိုလုပ်နိုင်တာပေါ့
လွယ်ပါတယ် ဒီဆော့ဝဲလေးကို Run လိုက်
မလိုချင်တဲ့ software လေးတွေရဲ့ icon သို့မဟုတ် နာမည်လေးတွေကို
မှတ်ထားပေါ့ ပြီးရင် ဒီအထဲကနေ uninstall ဆိုတာနဲ့ ပီးပီ
တရုတ်ဆော့ဝဲတွေ ဝေးဝေးပြေးတော့ လုပ်ပစ်လိုက်လို့ရပြီ
ကဲကြာတယ် လုပ်ပစ်လိုက်တော့ အာရုံနောက်တယ်
Download From D-h.st
2:02:00 PM Myanmar News Updates No comments
အသက် (၄၉)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Wesley Warren Jr သည် Las Vegas မြို့
မှ ဖြစ်ပြီးသူကို လူသိများစေတာကတော့ (၁၃၂) ပေါင်ရှိသော ဝှေးစေ့ ရှိသော
လွန်ခဲ့သော နှစ်များတွင်နိုင်ငံတကာ မှ သတင်းများ၏ ခေါင်းကြီးပိုင်း
တွင် သူ့အကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ကြရာတွင် သူသည် scrotal lympledene ဟု
ခေါ်သော ရောဂါခံစားနေသူဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ သူ၏အခက်ခဲကို ကူညီဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိသူ
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးက အခမဲ့ ခွဲစိတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း
စက္ကန့် (၃၀) လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတိုင်း ခေတ္တနားနေရသော
ကြောင့် ကလေးလိုပဲလို့ သူကဆိုပါတယ်။
(၁၃) နာရီကြာမယ့် ဒီခွဲစိတ်မူအတွက် အောင်မြင်ပြီးဆုံးချိန်တွင်
သူသည် ဝှေးစေ့ မရှိသော အမျိုးသားတန်ဆာဖြင့် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော
အိမ်ထောင်သုခ မရမှာကို သူစိုးရွံ့နေသည်။
ကျွန်တော် ဒီအခွင့်အရေးရဖို့ ebay မှာ ကျွန်တော့ဝှေးစေ့ကို
လေလံတင်ခဲ့ကြောင်း၊ အများမှ အားပေးသော e-mail များ မှာလည်းသူ့
အတွက်အားဖြစ်ရပါကြောင်း နှင့် အမှောင်ဖုံးနေသော လိူင်ခေါင်းတွင်းမှ
အစွန်းတဖက်က အလင်းရောင်ကိုမြင်နေရပါပြီ ...သို့ပေမဲ့ ဗျာ ကျွန်တော်
လိူင်ခေါင်းထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါကြောင်း တင်ဆက်လိုက်
မေထုန်မဲ့ သားစပ် သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
1:47:00 PM Myanmar News Updates No comments
From : .. MWD
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး လပွတ္တာခရိုင် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် မွေးမြူ ရေးနှင့်ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ မြို့နယ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖွင့်လှစ်သော နွား မေထုန်မဲ့ သားစပ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို ယမန်နေ့ နံနက် ၈ နာရီက မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန ရုံးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲတွင် မြို့နယ် ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းတန်က အမှာစကား ပြောကြားပြီး လပွတ္တာခရိုင် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ သိန်းဝင်းက နွားမျိုးကောင်း မျိုးသန့်များဖြင့် မေထုန်မဲ့ သားစပ်လျှင် သမားရိုးကျထက် နွားနို့ ရှစ်ပိဿာမှ ၁ဝ ပိဿာ အထိ ပိုမို ထွက်ရှိခြင်း များကိုလည်းကောင်း၊ မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာ ထွန်းဇော်ဝင်းက အသား တိုးနွား မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် နွားမွေးမြူသူများ ဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိပြီး အသားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရရှိနိုင်ခြင်းကို လည်းကောင်း အသိပညာပေး ဆွေးနွေး တင်ပြ ကြသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းသို့ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၃ဝ မှ ကျေးလက် မွေးမြူရေး သင်တန်းသား ၃ဝ ဦး တက်ရောက်ကြ ပြီး သင်တန်း ကာလမှာ သုံးရက် ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ကွယ်မှ ကုလားတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ လူမျိုးဘာသာမခွဲခြား မြန်မာနိုင်ငံသား နာမည်ခံ အဖွဲ့ စာမျက်နှာများ ဦးဝီရသူကို လုပ်ကြံသတင်းလွှင့်
1:44:00 PM Myanmar News Updates 1 comment
"အလင်းမျက်ဝန်း ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဦးဝီရသူသတင်း မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဖော်ပြ"
အလင်းမျက်ဝန်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ ပေါ်ပြခဲ့သော "969 ၀ီရသူနဲ့အဖွဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းက မောင်းထုတ်ခံရပြီ"ဟူသော သတင်းမှာ လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော သတင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဦးဝီရသူ၏ (၁၇-၇-၂၀၁၃)ရက်နေ့ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ခတ်သင်ကျေးရွာ တရားပွဲခရီးစဉ်မှ ဓာတ်ပုံကို ယူသုံးထားခြင်း။
၃။ ဦးဝီရသူသည် ကျောက်ပန်းတောင်းခရီး လုံးဝမရှိခဲ့ခြင်း။
၄။ ( ၁၈-၇-၂၀၁၃)နေ့တွင် ဦးဝီရသူ facebook-မှာ တင်ထားသော ဓာတ်ပုံကိုယူသုံးထားခြင်း။ဦးဝီရသူတင်ထားသော ဓါတ်ပုံမူရင်းလင့်ခ်-
» ၀ီရသူ မျက်နှာမဲ့၍ နွားလည်းစီးနေပုံ၊ 969 ရပ်ကွက် ဆိုင်းဘုတ် (ဓာတ်ပုံ - ကျော်နန္ဒ)
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ကုန်တင်လေဆိပ် အဖြစ်သာ ထားရှိမည်
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ်ကြီး တည်ဆောက်မှု ပြီးစီးပါက ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အား နိုင်ငံတကာ လေကြောင်း ခရီးစဉ်များ ဆင်းသက်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ စီးပွားရေး လေဆိပ်တစ်ခု အဖြစ်သာ ထားရှိတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ်ကြီးအား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှ စတင်ကာ လေးနှစ်တာ ကာလအတွင်း အပြီးတည်ဆောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပင်မ၀င်ပေါက် လေဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ၀င်ပေါက်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အား ဟံသာဝတီ လေဆိပ်သစ်ကြီး ပြီးစီးချိန်တွင် စီးပွားရေး လေကြောင်း ခရီးစဉ်အဖြစ် အရေးပေါ် လာကြသည့် လေယာဉ်များ၊ အထွေထွေလုပ်ငန်းသုံး လေယာဉ်များ၊ VIP လေယာဉ်များ၊ စင်းလုံးငှား လေယာဉ်များ၊ ပြည်တွင်းလေကြောင်းမှ လေယာဉ်များ၊ ကုန်တင်လေယာဉ်များသာ ဆင်းသက် အသုံးပြုမည့် စီးပွားရေး လေဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ် ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
''ရန်ကုန်လေဆိပ်က အခုလက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက၀င်ပေါက် ဖြစ်ပေမယ့် ဟံသာဝတီ လေဆိပ်ကြီး ပြီးသွားတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက ၀င်ပေါက်ကို ဟံသာဝတီ လေဆိပ်အဖြစ် ထားရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို စီးပွားရေးအရ လာရောက်တဲ့ စင်းလုံးငှား လေယာဉ်တွေ၊ VIP လေယာဉ်တွေ၊ ကုန်တင်လေယာဉ်တွေ ဆင်းသက် အသုံးပြုမယ့် စီးပွားရေးလေဆိပ် တစ်ခုအဖြစ်သာ ထားရှိမှာပါ။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ဆင်းသက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းတွေ အကုန်လုံးကို ဟံသာဝတီ လေဆိပ်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားမှာပါ'' ဟု လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်စိုးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အား အဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး အဆင့်တွင်လက်ရှိ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ Pioneer Aerodrome Services ကုမ္ပဏီအား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် စတင် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အပြီးသတ် တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းဆွေထွန်းက ပြောပါသည်။
11:56:00 AM Myanmar News Updates No comments
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အာလူးစိမ်းဓါတ်စာ ဖျော်ရည်လုပ်နည်းဟာ အလွန်ပဲလွယ်ကူပါတယ် ။ အရွယ်တူ အာလူး (၃)လုံးကိုယူပြီး ရေစင်အောင်ဆေးပါ ၊ အခွံမနွှာရပါ ။
သဘာဝ ဓါတ်စာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ရောဂါဝေဒနာရှင်များ လက်တွေ့အသုံချနိုင်ရန် အကျိူးငှာ ဤ ဆေးနည်းအား တဆင့်ပြန်လည်ဝေငှပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
11:50:00 AM Myanmar News Updates No comments
သြဂုတ်လ ၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီခန့်က ညီအစ်မချင်း စကားများရာ အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်ဌေး၏ ခင်ပွန်း ဦးမြင့်အောင်က ခယ်မဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ခင်အေးကို အရိုး ငါးလက်မ၊ အသွား ၁၂ လက်မရှိ ဓားရှည်ဖြင့် ခုတ်ခဲ့ရာ ဒေါ်ခင်ခင်အေး၏ ညာဘက် လက်ခလယ်နှင့် လက်သူကြွယ်လက် နှစ်ဆစ်ခန့် ပြတ်သွားပြီး ယင်းအချိန်တွင် အနီးသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ၎င်း၏ခင်ပွန်း ဦးရဲလွင်အောင်ကို ဦးမြင့်အောင်က ဓားဖြင့် ဆက်လက်ခုတ်ခဲ့ရာ ဦးရဲလွင်အောင်၏ ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်တွင် ဓားဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ယင်းအမှုကို စစ်ဆေးခဲ့သော မိတ္ထီလာမြို့ မြို့မရဲစခန်း၏ အမှုစစ်ဒုရဲအုပ် ဌေးဝင်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဦးရဲလွင်အောင်က ဦးမြင့်အောင်ကို အရိုး ငါးလက်မ အသွား ၁၂ လက်မဓားရှည်ဖြင့် လည်ပင်းကို ခုတ်ရာ ဦးမြင့်အောင်သည် လည်ပင်း ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းသို့ အချင်းများရာမှ ဦးရဲလွင်အောင် ရင်ဘတ်ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဒေါ်ခင်ခင်အေး လက်အဆစ်ပြတ်ဒဏ်ရာ ရရှိကာ ဒေါ်တင်တင်ဌေး ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ ရရှိ၍ ၎င်းတို့ သုံးဦးကို ပခုက္ကူမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် တင်ပို့ကုသလျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါအမှုစစ်က ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးရဲလွင်အောင်ကို ပခုက္ကူမြို့ မြို့မရဲစခန်းတွင် ပ၂၃၉/၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၂၆ အရ အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ပခုက္ကူမြို့ မြို့မရဲစခန်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မိန်းကလေးများ သဘောကျနှစ်သက်ချစ်ခင်သော ယောက်ကျားများ
11:49:00 AM Myanmar News Updates No comments
၁။ ကိုယ်ပိုင် အရည်ချုင်းရှိပြီး ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် သစွာရှိတတ်သော ယောင်္ကျား။
၂။ အရက်သောက် ကွမ်းစား ဆေးလိပ်သောက်တတ်ပေမဲ့ဘယ်သူ့ ကိုမှ ရန်မရှာပဲ
ကိုယ့်ကိုယ့် အေးဆဲနေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၃။ အရက်မသောက် ကွမ်းမစား ဆေးလိပ်မသောက်ပဲ့ ရိုးရိုးလေး နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၄။ စကားပြောပြီး အလုပ်ကို လက်တွေ့ လုပ်တတ်သောယောင်္ကျား။
၅။ ကိုယ့်ချစ်သူက တစ်ခြားယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူသွားနေတာကိုတွေ့ ပေမဲ
့ အထင်မလွဲ့ ပဲ့ နားလည်မှုရှိတဲ့ ယောင်္ကျား။
၆။ ဆင်းရဲ့ ပေမဲ့ ရိုးသားကြိုးစားပြီး ဘယ်သူ့ ကိုမှအပြစ်မမြင်တတ်သော ယောင်္ကျား။
၇။ စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး သူများကို ကူညီတတ်သော ယောင်္ကျား။
၈။ မကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုရော ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုရော
အထင်မသေးပဲ့ ကြည့်ဖြူစွာနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၉။ ရုပ်ဆိုးရုပ်လှတာကို မရွေးပဲ့ အချစ်စစ်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းသောချစ်သူကို
၁၀။ ပညာမတတ် ရုပ်မဖြောင့်ပေမဲ့ အသိညဏ်ရှိပြီး ရည်းမှန်းချက်ကို
အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၁၁။ မိဘ စကားနားထောင်ပြီး ကိုယ့်ချစ်သူ ပြောတဲ့ စကားတွေကိုလည်း
၁၂။ မိန်းကလေးတွေကို စိတ် နဲ့ မပြစ်မှားတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၁၃။ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ရဲ့ ပြီး အမြင်မတော်တာကို ကူညီတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၁၄။ ရည်းစားတွေ အများကြီးထားခဲပေမဲ့မိန်းကလေးတွေ ဘ၀ကို နစ်နာအောင်
၁၅။ အပျော် အပါး မလိုက်စားတတ်သော ယေင်္ကျား။
၁၆။ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို လွယ်လွယ် နဲ့ တည်ဆောက်လို
့မရဘူးဆိုတာ သိတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၁၇။ ချစ်သူ နဲ့ ဘာပဲစားစား ဘာပဲဝယ်ဝယ် ကိုယ့်ဆီက ပိုက်ဆံကို ထုတ်ပြီး
ကျသလောက်ကို ရှင်းတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၁၈။ သူတစ်ပါးဆီက ပေးတဲ့ အခွင့်ရေးကို မယူတတ်ပဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ရုန်ကန်
၁၉။ မိဘတွေ ပိုက်ဆံချမ်းသာံပေမဲ့ အလွယ်တကူ မယူတတ်ပဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို
၂၀။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို စည်းကမ်းရှိပြီး သန့် သန့် ရပ်ရပ် နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၂၁။ စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး ဘယ်သူ့ ကို မဆို အပြုးမပျက် ဆက်ဆံတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၂၂။ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါ စိတ်ဓါတ်မကျပဲ့ အောင်မြင်မှု့ ကို
၂၃။ အမှန်ကိုပြောတတ်ပြီး အမှန်တိုင်းလုပ်တတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၂၄။ မိန်းမ ယူပြီးသောတဲ့ အခါ မိန်းမ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း အားတဲ့ အခါ
ကူပြီး လုပ်ပေးတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၂၅။ မိန်းကလေးတွေ အပေါ် ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာတဲ့ စကားတွေကို မပြောတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၂၆။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးအပေါ် အနစ်နှာခံပြီး အသက်ကိုပေးဆပ်ရဲ့ တဲ့ ယောင်္ကျား။
၂၇။ လွယ်လွယ်နဲ့ အပြစ်မတင်ပဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ပြောတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၂၈။ ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့ တဲ့အခါ ချစ်သူရဲ့ လက်နဲ့ ပခုံးက လွဲ့ ပြီး
ကျန်တာတွေကို မကိုင်တတ်တဲ့ ယေင်္ကျား။
၂၉။ မိန်းကလေးတွေ အထင်မသေးအောင် နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
၃၀။ ဘယ်မိန်းကလေးတွေမဆို အစ်ကိုကို့ ချစ်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့ အခါ
အခွင့်ရေးမယူပဲ့ ငါ့ မှာ ချစ်သူရှိ်တယ်လို့ ပြောတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား။
အချစ်ဆိုတာ နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ အရာပါလို့ ဆိုတဲ့ ဂျင်းနီ
11:41:00 AM Myanmar News Updates No comments
အချစ်ဆိုတာ နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ အရာပါလို့ ဆိုတဲ့ ဂျင်းနီအနုပညာ လောကတွင် မြန်မာအက၊ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် လုပ်ငန်း များကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ပရိသတ် အားပေးမှုနေရာတစ်ခု ရရှိနေသော အဆိုတော် ဂျင်းနီက " အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်မှု တွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့အရာ"ဟု ၎င်းကပြောသည်။
"အခု လောလောဆယ် အချစ်ရေး ကတော့ အေးဆေးပါပဲ၊ အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်မှု တွေနဲ့တည်ဆောက် ထားတာပါ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အားနည်းချက်အားသာ ချက်တွေကို နားလည်ဖြည့်ဆည်း ပေးရမယ်လို့ နားလည်တယ်" ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခု လတ်တလော ဂျင်းနီ၏ တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးအတွက် အာရုံများ နေကြောင်း၊ စိတ်တိုင်းကျ ရရှိရန် သီချင်းတွေကို အချိန်ယူစီစဉ်ဖြစ်နေကြောင်း သရုပ်ဆောင်နှင့် အဆိုဘက်ကိုသာ အာရုံစိုက်ဖြစ်နေ ကြောင်း ဂျင်းနီကထပ်မံပြောပြသည်။
အဆိုတော် ဂျင်းနီသည် အနုပညာ လောကသို့ ဟန်နွေငြိမ်း အမည်ဖြင့် စတင်လျှောက်လှမ်း လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆို၊ က၊ ရေး တီးပြိုင်ပွဲတွင် အကပညာဖြင့် ရွှေတံဆိပ် ဆုများ ရရှိထား သူဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဂျင်းနီဟု အမည်ပြောင်း၍ သီချင်းများ သီဆိုခဲ့ပြီး အနုပညာလောကတွင် ပရိသတ် အသိအမှတ်ပြု ခံထား ရသော အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
11:28:00 AM Myanmar News Updates No comments
အမျိုးသား အများစုက အစာကို စနစ်တကျ ရွေးချယ်ပြီး စားလေ့ မရှိကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုမစိုက်ဘဲ လျစ်လျူရှုထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ သက်ရှည် ကျန်းမာရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇနီးမယားတွေကပဲ သင့်အမျိုးသား အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစာတွေ ပါဝင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေဖြင့် လယ်ယာမြေ ပြဿနာများကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်း၍ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ နှစ်လတစ်ကြိမ် တင်ပြရမည်
11:22:00 AM Myanmar News Updates No comments
သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေဖြင့် လယ်ယာမြေ ပြဿနာများကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်း၍ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ နှစ်လတစ်ကြိမ် တင်ပြရမည် ဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ် ၁၆ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများ နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းပြီးနောက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် ရယူရာတွင် ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထည့်သွင်း အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက''စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီအရင်ခံစာအပေါ် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ ယခုကိစ္စအား အလေးအနက် ထားရှိကာ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားမျှတစွာဖြင့် အလျင်အမြန် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပါရန် ဆိုတဲ့နေရာမှာ (အခင်းဖြစ် ကိစ္စရပ်များအတွက် ပြည့်စုံသော၊ မှန်ကန်သော၊ အရည်အချင်းရှိသော သက်သေခံ ချက်များဖြင့်) နှင့် နှစ်လတစ်ကြိမ် အနည်းဆုံး ထားရှိကာ ဤကိစ္စရပ်များ အတွက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးနေမှုများကို လွှတ်တော်များသို့ ရှင်းလင်းတင်ပြရန် တိုက်တွန်း လိုပါတယ်'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ''ဒါ့ကြောင့် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများကြောင့် ပြည်သူများ နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ အပိုင်း ၃ နှင့် ယင်းအစီရင်ခံစာပါ သုံးသပ် အကြံပြုချက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်က ဒီနေရာမှာ ဒီနေ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရသက်သက်က ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ (အုပ်ချုပ်ရေး) နဲ့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အစိုးရ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍများအတွက် ထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားတာရှိပါတယ်'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
''မြေယာ မှုခင်းများဟာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စအတွက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များမှ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါက လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ တရားရုံး အဆင့်ဆင့်ကပင် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များသို့ လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ၊ ကော်မရှင် အသီးသီးသို့ လည်းကောင်း၊ မြေယာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာများ ရှိပါက ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်များသို့ လွှဲပို့ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထိုမှုခင်း ကိစ္စရပ်များကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ထပ်ဆင့်ပြီး သဘောတူညီဖို့ လိုအပ်ပါတယ်'' ဟု ဦးရွှေမန်းက ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် လယ်ယာမြေ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း၍ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် အဆိုကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် လွှတ်တော်တို့၏ ဦးတည်ချက်များသည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးတည်ကြောင်း၊ လွှတ်တော်မှ တိုက်တွန်းသော အဆိုများကို အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၈ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက သတင်းထောက်များကို သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကင်ဆာရောဂါအတွက် ဓာတ်ရောင်ခြည်များ မြို့ကြီး ၄ မြို့တွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုသွားမည်
ရန်ကုန် ၊ ၁၇-၈-၂၀၁၃
ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနေသည့် လူနာများအား ကုသနိုင်မည့် အဆင့်မြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည် စက် Linear Accelerator များ အသုံးပြု နိုင်ရေး အတွက် ဆေးရုံကြိး ၄ ခုတွင် အဆောက်အအုံ ပြုပြင်ခြင်း နှင့် စက်တပ်ဆင် ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ၊ ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင် အသုံးပြု နိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန မှ ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းအောင် က ပြောကြား ခဲ့သည်။
တပ်ဆင် အသုံးပြုမည့် ဆေးရုံများမှာ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် Cobalt ဓာတ်ရောင်ခြည် စက်(၂)လုံး ၊ မန္တလေး ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် Cobalt ဓာတ်ရောင်ခြည် စက်(၂)လုံး ၊ တောင်ကြီး စ၀်စံထွန်း ဆေးရုံကြီးတွင် Cobalt ဓာတ်ရောင်ခြည် စက်(၁)လုံး နှင့် နေပြည်တော် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် Cobalt ဓာတ်ရောင်ခြည် စက်(၁)လုံး အဆင့်မြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည် စက် Lintar Accelerator များ တပ်ဆင် အသုံးပြု သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်တွင် သင်္ဘောနှစ်စီးတိုက် ၂၄ ဦးသေ ၆၀၀ ကျော် ပျောက်ဆုံး
11:19:00 AM Myanmar News Updates No comments
သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Cebu ပြည်နယ်က မြစ်တစ်နေရာမှာ ခရီးသည်တင် သင်္ဘောတစ်စီးနဲ့ ကုန်တင် သင်္ဘောတစ်စီး တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ယင်းတိုက်မှုကြောင့် ခရီးသည်တင် သင်္ဘောမှာ ခရီးသည် ၆၂၉ ဦး ပျောက်ဆုံး လျက် ရှိပါတယ်။ ၂၄ ဦးကတော့ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ ကုန်တင် သင်္ဘောမှာ သင်္ဘောသား ၃၈ ဦးကိုတော့ အားလုံး အသက်ရှင်လျက် ကယ်ဆယ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပျောက်ဆုံးမှု တစ်ရက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ၆၂၉ ဦးဟာလည်း အသက်ရှင်ဖို့ မသေချာတော့ပါဘူး။ ခရီးသည်တင် သင်္ဘောမှ ခရီသည် ၁၀ ဦးကျော်သာ အသက်ရှင်လျက် ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်တင် သင်္ဘော M/V Sulpicio Express7နဲ့ ခရီးသည် သင်္ဘော M/V St. Thomas Aquinas တို့ တိုက်မှုအတွက် ဖိလစ်ပိုင် ကမ်းခြေ လုံခြုံရေး အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးစုံစမ်းလျက်၊ ကယ်ဆယ်လျက် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၈ ရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
ရေကူးဘူတာရုံလမ်းနှင့် မြစံပယ်လမ်းထောင့်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းနေသည်ကို သြဂုတ် ၁၆ ရက် ည ၁၂ နာရီကျော်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဝေလင်းအောင်)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၈ ရပ်ကွက် ရေကူးဘူတာရုံလမ်းနှင့် မြစံပယ်လမ်းထောင့်တွင် သြဂုတ် ၁၆ ရက် ည ၁၂ နာရီတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၂၀ ၀န်းကျင်ခန့် မီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီး မီးသတ်ကား အစီး ၅၀ ခန့်ဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ သြဂုတ် ၁၇ ရက် နံနက် ၀၀း၃၀ ခန့်တွင် မီးငြိမ်းသတ် နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှု အကြောင်းအရင်းမှာ ကနဦး စစ်ဆေးချက်များအရ အိမ်နံပါတ် ၈၂ မှ စတင်လောင်ကျွမ်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ခ်ကြောင့် လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးမှာ လတ်တလော ခန့်မှန်း၍ မရသေးကြောင်း မီးလောင်ကျွမ်း နေသည်ကို လာရောက်ကြီးကြပ် ငြှိမ်းသတ်နေသည့် မီးသတ်အရာရှိ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
''မီးက ၁၂ နာရီမှာ စပြီး လောင်တာပါ။ မိုးဖွားကျနေတဲ့ အချိန်မို့ ဘယ်သူကမှ သတိမထားမိပါဘူး။ မီးလောင်တဲ့ အခါကျတော့ အိမ်တွေက ပူးကပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ၀ါးထရံတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လောင်ကျွမ်းမှု ပိုကောင်းသွားတယ်။ ကျွန်တော်က အိပ်နေတာ။ ညှော်နံ့ရလို့ ထွက်ကြည့်တော့ မီးတောက်က အတော်ကြီးနေပြီ'' ဟု အဆိုပါ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် အနီးရှိ ရပ်ကွက်များသို့ လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်တောက်ထားမှုများ ပြုလုပ်ထားပြီး ယာယီကယ်ဆယ်ရေး စခန်းလည်း ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
Laptop အကြောင်းတွေကို စုံစုံလေး သိစေချင်လို့ လိုင်းပေါ်က ပြန့်ကြဲနေတဲ့ အပိုင်းအစတွေကို စုစည်းပြီး ပို့စ်တစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်
11:16:00 AM Myanmar News Updates No comments
ကျွန်တော် Laptop တလုံးကို စတင်ဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ သိထားသင့်တယ် ဘယ်အမျိုးအစားတွေက ဘာအတွက် ပါဝင်လာတယ် နောက်ထပ် ဘယ်အပိုင်းလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပြီး ၀ယ်ယူရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ Laptop တွေ ခေတ်စားလာတာနဲ့ အတူ ထွက်လာတဲ့ အမှားများစွာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ပီးရင်ဆိုင်နေရသူတွေ ရှိသလို ကျွန်တော်တို့ ဘယ် အမျိုးအစားက ဘာအတွက် သုံးတယ်ဆိုတာကို သိဖို့တွက်ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် နားလည်သလောက်ကို လူတိုင်းနားလည်အောင် တက်နိင်သလောက် အသေးစိတ် ဆန်ဆန် ရေးပေးချင်မိပါတယ်။ တပိုစ့်ချင်းဆီကို စောင့်ဖတ်ပေးပါလို့ ပဲ့ တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်တွေကို အောက်က လို အပိုင်း ၃ ပိုင်း ခွဲထားပါတယ်။အပိုင်း (၁) ပါဝင်မူ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ။
Log Off မဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတာကို တစ်ချို့က မသိကျပါဘူး...ဘယ်လို လုပ်ရလည်း ဆိုတော့....
ထိုနည်းတူးစွာပဲ control panel က သွားပြီး လုပ်လဲ ရတယ်ဒါဆိုရင် အားလုံး Ok သွားပါလိုက်.....
ဒီခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ Desktop ထက် Laptop ကိုပိုသုံးစွဲလာကျပါတယ်။အဲဒီအခါမှာ Laptop ဘက်ထရီသုံးစွဲမှု အကြောင်းသိဖို့လိုပါတယ်။ Laptop သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဘက်ထရီလုံးဝအားကုန်သွားသည်အထိ အသုံးမပြုဘဲ အားအနည်းငယ် ကျန်သောအချိန်တွင် မဖြစ်မနေအားပြန်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဘက်ထရီ ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျန်တဲ့အချိန်မှာ အားပြန်သွင့်သင့်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ လုံးဝကုန်သွားတဲ့အထိသုံးရင်RAM၊ Mother Board တို့ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အပြင် ဘက်ထရီလည်းကျသွားတတ်တယ်။
နောက်ပြီးဘက်ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဘက်ထရီ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျန်သော အချိန်တွင် အားပြန်သွင်းပါက သင့်လျော်ပြီး လုံးဝအားကုန်သွားပြီးမှ ပြန်သွင်းလျှင် အားပြန်ပြည့်ရန် အချိန်ကြာတတ်ပါတယ်။ Laptop များ၏
ဘက်ထရီမှာ Cells အပေါ်မူတည်ပြီး4Cells ဆိုပါက တစ်နာရီခန့်၊6Cells ဆိုပါကနှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီ၊9Cells ဆိုလျှင် ရှစ်နာရီခန့် သုံးလို့ရပါတယ်။ Laptop ၀ယ်ပြီးပြီးချင်း ရှစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အထိ သွင်းရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျရင် အဲဒီလောက်သွင်းစရာမ လိုတော့ဘူး။ သုံးနာရီလောက် သွင်းရင်ရပြီ။ Toshiba Laptopမှာသုံးထားတဲ့ ဘက်ထရီတွေက အနည်းဆုံ6းCells ရှိတယ်။ အားပြန်သွင်းသင့်တဲ့ အချိန်ရောက်ရင် Warning ပေးတဲ့ စနစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အားသွင်းဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီး မသုံးဘဲ ဒီအတိုင်းထားရင် ဘက်ထရီရဲ့ Capacity ကလျော့သွားတတ်ပါတယ်။
- Laptop တွေကို မျက်နှာပြင်ညီညာတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါ။ မျက်နှာပြင် မညီညာတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါက အောက်လက်မှာရှိ တဲ့ လေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပြီး အပူချိန် တက်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကယ်တမ်းက PUMA platform လို့ ပြောလိုက်ရင် CPU တစ်ခုထဲကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ AMD က သတ်မှတ် လိုက်တဲ့ laptop တစ်လုံးအတွက် CPU, chipset, memory technology, GPU (graphic processor) တွေ အားလုံး အတွဲတစ်ခုကို ပြောတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ PUMA မှာ ဘာတွေ ပါသလည်း…။CPU က Turion X2 Ultra အမျိုးအစားပါ။ AMD CPU တွေက သိပ်ပူတာပဲ။ ဘယ်လိုမှ သုံးလို့ မကောင်းဘူး လို့ ပြောမယ် ဆိုရင် ဟုတ်ပါတယ်။ AMD ရဲ့ CPU တွေက Intel ထက် ပိုပူတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးလို့မကောင်းအောင်ပူ တာတွေက အရင်တုန်းက Althlon X2 တွေပါ။
အခု နောက်ထွက်တာတွေက Turion X2 တွေပါ။ Turion X2 တွေက Dual Core တွေပါပဲ။ မူလ Turion X2 တွေက Intel CoreDuo လောက်ရှိပါ တယ်။ Core2Duo ကို မမှီပါဘူး။ အခုနောက်ထွက်တဲ့ Turion X2 Ultra တွေက နည်းပညာပိုင်းမှာ အသစ်တွေ ပါလာပါတယ်။ အတော်လေးလည်း ပိုပြီး ကောင်းလာပါတယ်။ ပြောရရင် Turion X2 Ultra ဟာ Turion X2 ထက် အများကြီး ပိုကောင်းတဲ့ architecture တွေ ပါပါတယ်။ ဥပမာ- Hyper Transport 3.0 လို နည်းပညာ တွေပေါ့။ ပြီးတော့ High Definition (Blue-Ray) DVD palyback ကို ကောင်းကောင်း support လုပ်ပါတယ်။
PUMA platform laptop တစ်လုံးကို ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အကြံပေးချင် တာ လေးတွေ ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံးက AMD Turion X2 ကို မ၀ယ်ပါနဲ့။ Turion X2 ကို ၀ယ်ရင် စိတ်ညစ်ကောင်း ညစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ Turion X2 Ultra ကိုပဲ ရအောင်ဝယ်ပါ။ Turion X2 Ultra တွေက ရိုးရိုး Turion X2 တွေထက် အများကြီး ပိုကောင်းတာ သေချာပါတယ်။ ပြီးတော့ Dual Core တွေ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က 32bit အပြင် 64bit ကို ကောင်းကောင်း support လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် 64bit OS တွေ စမ်းချင်ရင်လည်း အဆင်ပြေသလို အများဆုံး ထည့်နိုင်တဲ့ memory ကလည်း 4GB မဟုတ်ပဲ 8GB အထိ တပ်လို့ ရသွားပါတယ်။ ဒီနေ့အထိ Intel ရဲ့ Core2Duo တွေက 32bit ပဲ ရှိတဲ့အတွက် အများဆုံး ထည့်လို့ ရတဲ့ memory က 4GB ပဲ ရပါတယ်။ Turion X2 Ultra ကို ၀ယ်မယ်ဆိုရင် model number တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြံပြုချင် တာက ZM series Turion X2 Ultra တွေကိုပဲ ၀ယ်ပါ။ တစ်ခြား အရင်က model တွေကို မ၀ယ်ပါနဲ့။ ဥပမာ- RM လို မျိုးတွေက နောက်ဆုံးထွက် ZM တွေလောက် မကောင်းပါဘူး။
ဖြစ်နိုင်ရင် ZM 80 နဲ့ အထက်ကိုပဲ ၀ယ်ပါ။ အခု ၀ယ်လို့လည်း ရပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ရောင်းနေတဲ့ laptop တွေထဲမှာ ZM 86 (2.4GHz) တွေ တောင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ZM 80 (2.1GHz) လောက်ဆိုရင်ကို ကောင်းပါတယ်။
ဒါကတော့ laptop ပြုပြင်နည်းနှင့်သိသင့်စရာများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ . သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်)ရေးထားတာပါ. laptop နဲ့ desktop က သဘောတရားချင်း တူတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် တည်ဆောက်ပုံချင်း နည်းနည်းလေး ကွဲပါတယ်. desktop ကကျတော့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ casing ပုံးခွံထဲမှာ ထည့်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးလို့ရပေမယ့်. laptop ကျတော့ တစ်လက်မလောက်သာသာပဲ ရှိတဲ့ laptop အခွံထဲမှာ အားလုံး ပြွတ်သိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်လာအောင် တပ်ဆင်ထားရတာ တစ်ကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး. desktop သမားများက (၂)နှစ် (၃)နှစ်လောက် ဖုံတက်ချင်တက်ဆိုပြီး ပစ်ထားပေမယ့်
ပုံးကကျယ်တော့ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတယ်လေ. speed သိပ်ပြီး သိသိသာသာမကျဘူး. laptop ကျတော့ ၃ နှစ်လောက်လဲ ပစ်ထားမယ်. သန့်ရှင်းရေးလဲမလုပ်ဘူး. ဖြစ်သလိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ speed သိသိ သာသာကျပြီး laptop က ထွက်တဲ့ အပူချိန်ကလဲ သိသိသာသာ မြင့်တက် လာမှာဖြစ်ပါတယ်.
မယားကောင်းဆိုတာ အိပ်ယာထဲမှာ ပြည့်တန်ဆာလို နေရ-ကျင်...
"ဥရောပဘောလုံးပွဲစဉ် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် လင်...
အမျိုးသားများပါ သတိထားလာရတော့မည့် အမျိုးသမီးရောဂါ ...
အိမ်ထောင်ပြုမယ့် အမျိုးသားတို့အတွက် မိန်းမတို့၏ကော...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ကို ခင်ပွန်းများမပြောသင့်သောစကာ...
Day Club များတွင် Sexy Dance များကလျက်ရှိကာ အသက်မြ...
Android ထဲက ပါလာတဲ့ ဖျက်မရတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ တရုတ်ဆော့...
နောက်ကွယ်မှ ကုလားတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ လူမျိုးဘာသာမခ...
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ကုန်တင်လေဆိပ် အဖြ...
ညီအစ်မချင်း အချင်းများရာမှ တစ်ဦးသေ၊ သုံးဦးဒဏ်ရာရ...
မိန်းကလေးများ သဘောကျနှစ်သက်ချစ်ခင်သော ယောက်ကျားမျာ...
အချစ်ဆိုတာ နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ အရာပါလို့ ဆ...
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေဖြင့် လယ်ယာမြေ ပြဿနာများကို အ...
ကင်ဆာရောဂါအတွက် ဓာတ်ရောင်ခြည်များ မြို့ကြီး ၄ မြို...
ဖိလစ်ပိုင်တွင် သင်္ဘောနှစ်စီးတိုက် ၂၄ ဦးသေ ၆၀၀ ကျော...
ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၈ ရပ်ကွက်တွင် မီးေ...
Laptop အကြောင်းတွေကို စုံစုံလေး သိစေချင်လို့ လိုင်...
မိန်းကလေးများ ဖြစ်တတ်သော မိန်းမကိုယ်ဆိုင်ရာရောဂါမျ...
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး အတွက် အိုဘားမားက နည်းပညာ ခေါင်း...
ပန်းနုရောင် အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်စေမည့် အဆင့် ၁၀
တူနီးရှားတွင် အစ္စလာမ်မစ်အစိုးရအား ပြည်သူများက ဆန္ဒြ...
အိန္ဒိယ၏ နျူကလီးယား ပဲ့ထိန်းဒုံးတင် ရေငုပ်သင်္ဘော တရု...
အလေးထားသင့်သော ဖြစ်လေ့ရှိ လက္ခဏာရပ်များ ( သတိမမှု ဂ...
Ooredoo Myanmar က ဆင်းကတ်တစ်ကတ်လျှင် ကျပ် ၁၅၀၀ ဖြင...
နှစ် ၅၀ အတွင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ပုဂ္ဂလိက...
ရွှေအိမ်သည်လို မျိုးစောင့်တရား အမေစုမှာ ရှိခဲ့လျှင်...